China Puppy mapedhi Kugadzira uye Fekitori | Bondhot
Akakwana mapedhi ePotty Kudzidziswa
Ipa mbwanana yako mukana wakanakisa wekubudirira kana zvasvika pakudzidziswa muhari. Zvipfuwo zvekudzidzisa mapadhi zvinopa kuita kwepamusoro uye nyore kuvimbika kuitira kuti imbwa dzinoyevedza dzidzidze nekukurumidza.
Kuwedzera pakudzidzisa vana vadiki, mapedhi anoshandawo zvakanaka kubatsira imbwa dzinorwara kana kuchembera, kuita kuti imbwa dzive dzakasununguka panguva yekutakura, kana kupa imwe imbwa isina mukana wekunze wekunze.
Mazhinji saizi anowanikwa: Iyo saizi inozivikanwa kwazvo ndeye 22x22inches, 22x23inchs
Tinogona kuita hukuru hwakawanda sezvinodiwa nevatengi.
5Layer Leak Uchapupu Hwakagadzirwa
Padhi yega yega inouya nematanho mashanu kuve nechokwadi chekuburitsa humbowo kuita Iyo antibacterial yepamusoro dura inopa inokurumidza kuomesa quilted pamusoro iyo inokiya mukunyorova, kudzora hwema, uye inodzivirira kuteedzera. Iyo yekumusoro yakaturikidzana inochengeta mvura ichiyerera munzira kwayo, nepo chipanji-senge musimboti unopa kunyura kwakanyanya uye unoshandura mvura kuva gel pakusangana. Iwo maviri ekupedzisira materu eanodonhedza humbowo hwechipfuwo kudzidzisa mapads iyo yekukiya nhare uye inodzivirira epurasitiki lining - chengetedza pasi wakachengeteka kubva kukuvara.
Yakavakirwa-mukati Inokwezva Yekukurumidza Mhedzisiro
Inonyanya kugadzirirwa ine yakavakirwa mukukwezva, imbwa dzinokweverwa padhi kana zvisikwa zvichidana, zvinoreva kuti zvinokurumidza uye zvinobudirira poto kudzidziswa kwembwanana yako. Ingosarudza kwaunoda kuti imbwa yako iende, tambanudza pad, uye uiise pasi neepurasitiki pasi.
Imwe neimwe yekuvaraidza pet pad inopa kurerukirwa imbwa yako uye rugare rwepfungwa kwauri. Kamwe ikashandiswa, iyo pad iyo inopinza dhizaini uye inodonhedza-proof liner inogadzira kuchenesa snap. Ingokanda iyo pad, uye nekuisa pasi imwe nyowani.
Batsira kujairira mbwanana yako nepadhi nekumuisa padhi kakawanda masikati. Kana iyo mbwanana yabudirira kuenda muhari padhiza, ipapo mubayiro nekutaura kwekurumbidza uye chakakosha kurapwa, wobva watsiva padhi yakashandiswa neimwe nyowani. Kana mbwanana yako ikabvisa kumwe kunhu, zvinyoronyoro umudzore paden sekurudziro, uchigara uchishandisa yakanaka (isingatombovi) kusimbisa. Kuti uwane mhedzisiro, sunga mbwanana yako kune diki nzvimbo yekutanga, sekicheni kana imba yekugezera.
Pashure: Puppy traing mapedhi
Zvadaro: Dyara katsi marara